မယ့်ကိုး: ကတ်ကြေးဖြင့် ဆုံးဖြတ်သော…
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 7/31/2011 09:00:00 AM
Free လားဟင် ...
ဒါဆို သားသား ကောင်းစေ ကို ညပ်ပေးပါ။ မကြိုက်လည်း ပြသနာ မရှိပါဘူး။
ကောင်းစေ က ၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးတော့ ကတုံး တုံးပေးလိုက်မယ် :P
31/7/11 9:35 AM
ဆံပင်ညှပ်တာသိပ်ဝါသနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လေ ကိုယ့်လက်က မညီဘူး... ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအညှပ်မခံ ရဲလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဘဲ ညှပ်တယ်... ကြွက်စုတ်လိုပါဘဲ.. အဆင်မပြေဘူး.. အဲဒီစာအုပ်လေး ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ထားအုံးမှ..ကျေးဇူးး...
31/7/11 9:37 AM
စာလာဖတ်တဲ့ ကူးကူးနဲ့ ကောင်းစေလေးရဲ့ မေမေကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကောင်းစေလေးက နာမည်လေးလည်းလှသလို လူလေးကိုလည်း အမြဲချစ်ဖို့ကောင်းနေစေချင်တာ အမှန်ပါ။
ကလေးဆိုပေမယ့် ကျွန်မလက်ရာကြောင့် မတင့်မတယ်တွေ မဖြစ်စေချင်ပါဘူး :P
31/7/11 12:00 PM
ကျွန်မလောက်တော့ ဆိုးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှေ့ဆံပင်ကို တိပေးလိုက်တာ မျက်ခုံး ပါ ပါသွားလို့ မျက်ခုံးတဖက်မရှိ အုန်းမှုတ်ခွက်ကေ နဲ့ မြင်ယောင်သာ ကြည့်ပါ :P
31/7/11 9:59 PM
31/7/11 10:51 PM
မချစ်ဘူး မဟုတ်လား မေးမှာစိုးလို့ ဟိုးးးးး မိုင်ပေါင်း ထောင်သောင်းချီအဝေးက ခေါင်းထိုးအပ်သွားပါတယ်။ မယ် စိတ်ကြိုက် ညှပ်စေ..။ :)
1/8/11 12:33 AM
တိရုံလောက်ဆိုရင်ရော ဖြစ်မလား။ စမ်းကြည့်တာပေါ့လေ။ တစ်လလောက် ကတုံးပြန်တုံးလိုက်ရလည်း မဆိုးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညှပ်လိုက်စမ်းပါ။
သင်တန်းတက်စေချင်တယ်။ K image မှာ သင်တန်းတွေရှိတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျ ဖန်တီးနိုင်တာပေါ့။ ၀ါသနာပါတာကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်။ ဘ၀ဟာ တိုတိုလေး။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာသလိုနေ။
လင်းဒီပလည်း ခေါင်းစုတ်ဖွားနဲ့ပဲမဟုတ်လား။ သူနဲ့အရင်စမ်းကြည့်သင့်တယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ရှိတယ်မလား။
1/8/11 10:12 AM
Ma Ma and Ko Z..
I'm so thankful for your kind words :D
အစ်မလဲ ဒီမှာဆံပင်ညှပ်ခတွေ ဈေးကြီးလွန်းလို့ ဦးခြိ်မ့်ဆံပင်ကို လက်တည့်စမ်းချင်နေတာ။ သင်တန်းသွားတက်ဖို့စုံစမ်းတော့ အော်ဇီ ဒေါ်လာ ၃၀၀၀လောက်ကျမယ်ဆိုလို့ လက်လျှော့လိုက်တယ်။ ယူကျူ့ထဲမှာတော့ ဆံပင်ညှပ်နည်းတွေ ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပဲ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ပြောတာ။
မယ်ကိုးကတော့ လက်ရဲတယ်နော်။ အစ်မတော့ အဲလောက်မရဲဘူးဂျာ။
1/8/11 7:09 PM
မယ်ကိုးလက်ရဲမိတာ မကောင်းပါဘူး မမရယ်။ ချစ်စကို တိုစေတာ အမှန်ပါး)။ ကတ်ကြေးနဲ့ ဆံပင် မညှပ်ရချင်ပဲ မယ်ကိုးဆံပင်ကို ပြန်ညှပ်မယ်ဆိုပြီး ခြိမ်းခြောက်သူတွေ များနေလို့ပါ :P
ဘယ်လောက် ပုံပျက်ပျက် ဆံပင်က တစ်ပါတ်လောက်ဆို ပြန်ပုံကျသွားတတ်ပါတယ်။ သိပ်မပူပါနဲ့လို့ အားပေးပြီး ထပ်သာဆွဲညှပ်...း)
2/8/11 8:38 AM
မြှောက်ပေးမှုအတွက် အထူးကျေးဇူးပါနော် :D
2/8/11 7:54 PM
This is my first time in giving comment, and forgive me if I say something inappropriate. Even the professionals can't be trusted: here is what happenedamonth ago. My hairdresser was cutting my bang and at the same time, talking about her lovely son and the result, I lost half of my eyebrow. She said it doesn't seem bad as the bang covers my eyebrow, lol. Thanks to her, now I have new eyebrow, hehe.
hee ...so sorry to hear that dear :D
ညလေးနဲ့ မမ .. ညီအစ်မတွေ တယောက်နဲ့တယောက် ချစ်ခြင်းတူကြတာ ဆိုတော့ (အဲလိုကြွားချင်တော့း) အပြန်အလှန် ဆံပင်ညှပ်ရအောင်လေ ညလေး... နော်.. နော်လို့ (^^)"
4/8/11 7:51 PM
ချစ်မလေး လသာည မညှပ်ခင့် မယ့်ကို မြင်တာနဲ့ ဆံပင်ညှပ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်သူ နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်း)။ ချစ်မလေးနဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျရင် မယ်ကတုံးလေးနဲ့ ဖြစ်နေမယ် ထင်ပါတယ် :P
6/8/11 8:33 AM
ရပါတယ်.. ကတုံးလေးဖြစ်လည်း ဆံပင်နည်းနည်းရှည်တဲ့အထိ မမ စောင့်ပေးနိုင်ပါတယ်းD
6/8/11 12:42 PM
ဟုတ်ကဲ့ ချစ်မလေး... ဝဋ်မှာ အမြဲဆိုတာ မယ် အခုပိုယုံသွားပါပြီ :P
6/8/11 9:25 PM
I want,I want Mae Coe.
20/10/11 3:02 PM
yes , sis :D
20/10/11 8:41 PM
ကျနေ်ာလည်း တခါလောက် အညှပ်ခံချင်ပါတယ်။ မလှတော့လည်း ကတုံးစတိုင် ပြန်ညှပ်လို့ရသား
နောက်တစ်ခါတွေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတါသေချာသိရင်အဲ့ဝန်းကျင်ဆံပင်မညှက်ဖြစ်အေါင် စေါင့်နေပါ့မယ် ... မွန်ကဆံပင်ရှည်ထါးတါစိတ်ရှုတ်လွန်းတဲ့သူမို့ ဆံပင်ညှက်ချင်တဲ့အစ်မနဲ့ ရေစက်ဆုံတါနေမယ်နော် ........
28/12/12 12:25 AM